GoPro na-amanye ịdọrọ ya Karma drone | Akụkọ akụrụngwa
A manyere GoPro ịdọrọ ụgbọ mmiri Karma
Fewbọchị ole na ole gara aga, onye mepụtara igwe foto egwuregwu dị egwu, GoPro, kwupụtara nsonaazụ ego ọhụụ, nsonaazụ nke dị njọ karịa ndị nyocha buru amụma, na-ebute oke ọdịda na ọnụahịa ụlọ ọrụ ahụ. Ọnwa ole na ole gara aga, GoPro webatara Karma drone, otu drone nke ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịsọ mpi na onye isi ahịa ahịa ugbu a DJI. Mana o yiri ka a na-amanye ụlọ ọrụ ahụ ịdọrọ ngwaọrụ ahụ n'ụlọ ahịa ebe ọ dị ugbu a maka ire ere, n'ihi nnukwu nsogbu ọrụ.
O doro anya na dịka ọtụtụ ndị ọrụ si kọọ, mmiri ahụ na-efunahụ ike mgbe ọ na-efe efe, nke dị ugbu a amanye ụlọ ọrụ ịrịọ maka nloghachi nke opekata mpe nkeji 2.500, nke dị maka ọrịre kemgbe October 23 gara aga. Ọ dabara nke ọma site na ụbọchị achọtara ngwaọrụ a na ahịa, nsogbu ọrụ anaghị emetụta onye ọrụ ọ bụla.
Companylọ ọrụ ahụ ga-eweghachi ego ahụ nye ndị ọrụ niile zụtara ngwaọrụ ahụ n'oge ahụ, ma ọ bụ site na ụlọ ahịa ebe ha zụrụ ya ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume site na weebụsaịtị GoPro, ebe anyị nwere ike ịchọta ngalaba pụrụ iche maka isiokwu a. N'oge ụlọ ọrụ ahụ kwadoro na ọ na-arụ ọrụ na okwu a, nke dịka ihe niile gosipụtara yiri ka ọ na-egosi na nsogbu ahụ metụtara batrị, dị ka Rịba ama 7, ọ bụ ezie na oge a enweghị Karma drone a kọrọ na ọ gbawara.
Ihe Karma, ruru ọsọ nke 56 km / hour ma nwee ike iru mita 4.500 n'ịdị elu. O nwere nkeji 20, ekele batrị 5.100 mAh. Ọ nwere akụkụ nke 303 x 411 x 117 mm na ịdị arọ nke 1,06 n'arọ na n'ezie ọ dakọtara na igwefoto GoPro Hero 5 ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » A manyere GoPro ịdọrọ ụgbọ mmiri Karma
A maara ozi ọma a maka izu ole na ole, a na-eche ya mgbe ihe dị nso. Are bụ oyiri na mado ụdị. Nnọọ.
Ee mmadụ, ee, amarala ya tupu ebido mmiri na ihe niile. A maara ya ụbọchị ole na ole, ọ bụghị izu abụọ, iji hụ ma anyị gụrụ nke ọma.
Gwa m na nke isiokwu m depụtaghachiri ihe ọmụma.
Nọgidenụ na ya, na ị na-egosi onwe gị n'isiokwu ọ bụla ị na-akatọ, amaghị m ma ọ bụrụ na ị chọpụtala ya, mana ọ dị ka ị maghị. Ihere na ị na-agụ anyị ka anyị katọọ.
Ndị a bụ ọtụtụ ụzọ nchekwa nke Kim Dotcom ga - eme maka Megaupload ọhụrụ ahụ
Egwuregwu Google Play na-emezigharị kpamkpam iji lekwasị anya na gburugburu